Korea: Ireo Orinasa Mitsikilo Ny Fivezivezenao Any An-Kabone · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 27 Marsa 2018 2:21 GMT
Ireo Orinasa Mitsikilo Ny Fivezivezenao Any An-Kabone … Inona no hevitrao? Nahazo valiny mahaliana ilay lahatsoratra.
Ireo Orinasa Mitsikilo Ny Fivezivezenao Any An-Kabone
Tsy maintsy mijanona ao amin'izany orinasa izany ve ianao?
Raha mbola misy vola aloan'ny orinasa, mazava loatra tsy maintsy mampiasa anao izy. Izany no ataon'ireo mpandraharaha mahay azy ao anatin'ny kapitalisma. Aorian'izay, tsy afaka ny ho orinasa tsara indrindra eto an-tany va re ry zareo? Tsy handany 1 won… ary inona no azontsika atao rehefa miteny ry zareo hoe tsy voatery hiasa ianao rehefa tsy tianao ilay izy? Ianareo izay tsy afaka ny hanorina orinasa ve dia tsy maintsy mankasitraka ny hokaramaina ary ahoana no fijerinao ny resaka zon'olombelona amin'izao fotoana izao? Manontona ny fiainanao manontolo ho an'ny mpampiasa anao.
Olona toa milina mahabaiko tena ianao. Miaina anaty fiarahamonina iray tsy mijery ny maha-olona isika.
Mazava loatra fa ny fanafoanana no tokony hotsiniana. Saingy fihetsika iray tokony hahitsy ny fivezivezena tsy misy fitsaharany mandritry ny ora fiasàna. Tsy misy dikany akory, manjary mamadika ny tontolo manodidina hitsingilahila izany.
Tsy fantatro ny tena fandehan'ny tantara manontolo Fa raha ny mba fandinihako ny fitrangany, fintiniko aminà antony roa → voalohany: noho ny fialànao matetika eo amin'ny toerana fiasànao, misy tondro maromaro avy amin'ny lehibe eo amboninao, ary tsy afaka ny tsy hisy anefa izany. → faharoa, ferana ho fifanarahana amin'ny asa fotsiny ny fifandraisana eo amin'ireo mpiasa sy ireo mpampiasa. Tsy ijerena ny zavamisy hoe olona mitovy amin'ny tena izy ireny ary tsy azony atao ny mifehy ny zo maha-olona, dia manana fomba fisainana mivaona ireo lehibe fa hoe andevon-dry zareo ireo mpiasany.
Tsy azo saintsainina akory aza ny hanonofy hifoka sigara. ㅡ,.ㅡ
Raha lazaina tsotra, azoko sary an-tsaina tsara ny mahatonga izany… midonàka eny rehetra eny nefa milaza fa mandeha any an-kabone, mety nahaleo ny mpampiasa anao ny fialantsininao. Heveriko fa ireo orinasa manana vehivavy betsaka miasa ao aminy no toa manana io karazana olana io.
Koa maninona ianareo no misafidy ny vehivavy raha izany no zavamisy?
Mazava loatra… tsy miasa ianao ary mandany fotoana any an-kabone. Iza no mahalala? Mpiasa ianao ary ny tompony no lehibe izay manome sakafo ho anao.
Tsia. miasa mafy ireo mpiasa no sady manome sakafo ho an'ny tompon'ny orinasa. Ny anjara asan'ireo tariky ny mpitantana sy ny tompony dia ny manohana ireo mpiasa mba hahafahany miasa sy mamokatra tsara.
Heveriko fa tsy tokony horaisin'ireo olona miasa mafy ho toy ny fifehezana izany. Na atao hoe ny fiasàna mafy ho an'ny orinasa aza no fomba hanatsarànao kokoa ny fiainanao, betsaka ny olona no mandanilany fotsiny ora maro isaintsainana ny fomba fisainan'ny orinasa. Hmm… noho io antony io, heveriko fa mety tsy maintsy nametraka fepetra ny orinasa… Talohan'ny nametrahanao fanontaniana hoe ‘ny akoho sa ny atody no nisy voalohany?’, ho an'ny tenanao dia tokony hanananao ny toetra sy fisainana hiasa mafy, dia hiova ny fiainanao.
Be olana be ny orinasa…saingy tsy misy olona mieritreritra izay antony nandrisika ny orìnasa hanao zavatra tahaka izany….saintsaino ny momba izany.